» कोदोको पानी पिउँदै क्रिस्टिनालाई कसले फकायो ?
कोदोको पानी पिउँदै क्रिस्टिनालाई कसले फकायो ?
१९ बैशाख २०७४, मंगलवार ०१:३२
दर्जनौं हिट म्यूजिक भिडियोहरु पस्किसकेका निर्देशक रोजल थापाले गायकको रुपमा पनि आफ्नो परिचय थपेका छन् । हालैमा युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको “चिरिप्पै तानी कोदोको पानी फकाउला सानीलाई” बोलको गीतमा निर्देशक रोजलकै शब्द, संगीत र स्वर रहेको छ ।
लक्षु प्रकाश मल्लको एरेञ्ज रहेको गीतको भिडियोमा रोहित बस्नेतको कोरियोग्राफी छ । रामेश्वर कार्कीले भिडियो खिचेका हुन् भने सम्पादन श्याम कुँवरले गरेका हुन् । गायक रोजल आफैले भिडियो डायरेक्सन गरेका हुन् ।
बुटवलमा आए ‘तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ’ का टिम
कोरियोग्राफरबाट चलचित्र निमात्री बन्दै बुटवलकी श्रीस्टि घिमिरे
नायिका प्रियंका कार्की
कलिलो उमेरकी प्रसिद्धीको परिपक्क अभिनय- भिडियो सहित